Q: ကျမ အသက် ၃၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ လွန်ခဲ့သည့် ၄ နှစ်ခန့်မှစ၍ ဝမ်းချုပ်သောကြောင့် စအိုကွဲပြီး သွေးထွက်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ စဖြစ်ကာစ ၁ ခါ ၂ ခါ ကွဲချိန်တွင် ဆရာဝန်မှ ခွဲရန်မလိုသေးဟု ပြောပါသည်။ ၅ ခါ ၆ ခါလောက် ကွဲလာသောအခါ ခွဲသင့်သည်ဟု ပြောသော်လည်း နိုင်ငံခြားသို့ ထွက်လာခဲ့ရသောကြောင့် မခွဲဖြစ်လိုက်ပါ။ နိုင်ငံခြားရှိ ဆရာဝန်မှာ အပေါ်ယံ သေးသေးမို့ ခွဲရန်မလိုဟု ပြော၍ စအိုထဲ ထည့်သည့် ဆေးသာပေးပါသည်။ စအိုယားယံခြင်း နာခြင်း ဖြစ်သည့်အခါ ထည့်သည့်ဆေးဟု ပြောပါသည်။
ယခု နေ့စဉ် နေ့တိုင်း ဆေးထည့်လျှင်ထည့်၊ ဝမ်းနှုတ်ဆေး စားလျှင်စား တခုခု အမြဲ လုပ်ရပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၂ ပတ်က လိပ်ခေါင်း ဇီးသီးစေ့ခန့် ထွက်ပြီး ပြန်ဝင်သွားပါသည်။ စအိုကွဲခြင်း နှင့် လိပ်ခေါင်းမှာ ခွဲစိတ်လျှင် ကောင်းပါသလား။ ခွဲစိတ်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုးများကို ရှင်းပြပေးစေလိုပါသည်။ စအိုကွဲခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆရာဝန်မှ ခွဲလျှင် ကောင်းသည်ဟု ပြောပြီး (့) မှ ဆရာဝန်က ခွဲရန်မလိုဟု ပြောပါသည်။ ဝမ်းနှုတ်ဆေး နေ့တိုင်း စားလျှင်ရော ကောင်းပါသလား။ မည်သို့ ပြုလုပ်ရမည်ကို ပြောပြပေးစေချင်ပါသည်။
FIA ဆိုတာ စအိုပြွန်မှာ ဒေါင်လိုက် အနာဖြစ်တာပါ။ အလွန်နာတယ်။ လူနာ အင်မတန် စိတ်ညစ်ရတယ်။ နာပုံ နာနည်း ကလည်း ဝမ်းသွာတိုင်း စူးရှပြီး နာတာ။ ကွဲထွက်သလို ခံစားရတယ်။ ရေချိုးခန်းက ထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပါ ဆက် နာနေသေးတယ်။ ဝမ်းကလဲ သွားရမှာကို ကြောက်နေလို့ ချုပ်နေတာ များတယ်။ သွေးလဲ ထွက်တယ်။ ထွက်တဲ့သွေးက သွေးစိမ်းရှင်ရှင် အနီရောင်။ ဝမ်းဘေးမှာ အထက်-အောက် တန်းနေတတ်တယ်။ သွေးအား နည်းလောက်အောင် အထိတော့ မဆိုးပါ။ သွေးအပြင် မန်းရည်လိုလဲ ထွက်နိုင်တယ်။ ယားတတ်သေးတယ်။ မေးတဲ့သူပြောတာ အကုန်ပါဘဲ။
ဖြစ်လာရတာက ဝမ်းကြာကြာ ချုပ်တာဘဲ အပြစ်ဖို့တယ်။ အစားအစာထဲမှာ (ဖိုင်ဘာ) နဲတဲ့ အသီးအရွက် နဲတာ စားလို့လဲ ပါတယ်။ ကျား-မ ဆတူဖြစ်ကြတယ်။ ဖြစ်တဲ့-ကွဲတဲ့နေရာက နောက်တည့်တည့်မှာ များတယ်။ ရှားပါးတဲ့ စအိုရှေ့ပိုင်း ကွဲတာမျိုးက အမျိုးသမီးတွေက ပိုများတယ်။ ရက်တို-ရက်ရှည်။ နာတာရှည်ဆိုရင် မေးလာသူ ဖြစ်နေသလို လိပ်ခေါင်းပါ တွဲလာတယ်။ Sentinel pile ခေါ်တယ်။ သူက တံခါးမှူးလို နေလို့ပါ။
ကုသရတာမှာ ဝေဒနာဖြစ်စေတဲ့ စအို-အတွင်း-အထိန်းကြွက်သားကွင်း Internal sphincters ကို ပြော့လျှော့နေစေဘို့ လိုတယ်။ သူကဘဲ ဒုက္ခပေးနေလို့။ သူ ပြော့နေချိန် အနာကျက်စေနိုင်တယ်။ နာတာ သက်သာစေဘို့ 5% Xylocaine ထုံးဆေး လိမ်းပေးရတယ်။ အစားအစာတွေမှာ ဝမ်းပျော့အောင် အထူးဂရုစိုက် စားရမယ်။ Sitz bath ခေါ်တဲ့ ရေနွေး ထိုင်နည်း လုပ်ရမယ်။ Antibiotics ဆေးသောက်ရမယ်။ လိုအပ်ရင် Laxatives ဝမ်းနုတ်ဆေးပေးတယ်။
ဒါတွေနဲ့မှ မရရင် ခွဲစိတ်ခမ်း ဝင်ရပါမယ်။
တနည်းကတော့ မေ့ဆေးပေးပြီး Land’s dilation နည်းနဲ့ စအိုကို3x3fingers to4x4finger dilatation ချဲ့ပေးနည်း။ ဆေးရုံ တက်နေစရာ မလိုဘူး။ ညနေပြန်ဆင်း။ ပြီးစမှာ ဝမ်းမလုံတာ ၇-၁ဝ ရက် ဖြစ်နေအုံးမယ်။
နောက်နည်းကတော့ Lateral Anal Sphincterotomy ခွဲစိတ်နည်း ဖြစ်တယ်။ မေ့ဆေးက ပိုကောင်းပါတယ်။ ထုံဆေးနဲ့ လဲရတယ်။ Internal anal sphincter ဆိုတာကို ၈ နာရီနေရာမှာ ဖြတ်ပေးရတယ်။ ၃ ပါတ်နေရင် အနာကျက်မယ်။
Dorsal Fissurectomy and Sphincterotomy နည်းလဲ လုပ်တယ်။ Internal sphincter ရဲ့ ကန့်လန့်ဖြတ်နေရာကို ဖြတ်မယ်၊ လိပ်ခေါင်းရှိနေတာကိုလဲ ခွဲမယ်။ ၃ ပါတ်နေရင် အနာကျက်မယ်။
စအိုနေရာ ခွဲစိတ်တာ မှန်သမျှ Post–Operative Care ခွဲစိတ်ပြီး ဂရုစိုက်ရတာ အရေးပါတယ်။ အစားအသောက်၊ ဝမ်းပျော့ဆေး၊ အနာသက်သာဆေး၊ ပဋိဇီဝပိုးသေဆေး၊ နာတာသက်သာအောင် 2% Xylocaine gel ထုံဆေး ပေးရတယ်။
• Sitz bath ရေနွေးထိုင်တာမှာ Potassium permagnate or Dettol ပါ ထည့် ၂ဝ မိနစ် ထိုင်ရတယ်။
• Botulinum toxin ဆိုတဲ့ဆေး ပေးကုတာလဲ ရှိသေးတယ်။ အောင်မြင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
• Glyceryl trinitrate ထည့်ဆေးက ၂ ပါတ်နေရင် ၇၅% သက်သာတယ်၊ ၅၄% က ၆ ပါတ်နေရင် ပျောက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒီဆေးက ခေါင်းကိုက်စေတတ်တယ်။ နောက် သုတေသနတခုက Glyceryl trinitrate ဆေးကို တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၂ ပါတ် ပေးပြီး၊ ၂ လ အကြာ ပြန်စစ်တော့ ၆၉% မှာ အောင်မြင်တာ တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုတယ်။
ယေဘုယျ ပြောရရင် ဝမ်းနုတ်ဆေး နေ့တိုင်းစားတာ မကောင်းပါ။ အကျင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီရောဂါသမားအတွက် ဝမ်းမာနေရင် ရောဂါပိုဆိုးမှာမို့ သောက်ရလိမ့်မယ်။ မြန်မာဝမ်းနုတ်ဆေးလဲ သုံးကြည့်ပေါ့။ Milk of Magnesia ဆိုတာက ဝမ်းပျော့ဆေး။ အကျင့်မပါစေဘူး။ အိပ်ရာဝင်ချိန် ဟင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်းသောက်ရတယ်။ မန်ကျီးမှည့် ဖျော်ရည်၊ သင်္ဘောသီးမှည့်၊ ကန်စွန်းရွက်လဲ စားပါ။ ရေများများ သောက်ပါ။ ခွဲစိတ်ကုသနည်းက ပြေးလွတ်ရမဲ့ပုံ မရှိဘူး။
ဗမာပြည်မှာ ခါးထုံဆေးနဲ့ ခွဲတာ များတယ်။ ခွဲပြီး စအိုမှာ ရာဘာ-ပိုက်ကလေးတခုကို ဆီဆွတ်ထားတဲ့ ပတ္တီးပတ်ပြီး၊ ထည့်ထားတတ်တယ်။ လေလည်နိုင်မယ်။ စအို ကျဉ်းမသွားဘူး။ ၂ ရက်လောက်ပါ။ ခွဲပြီးစ အနေရခက်မှာ အမှန်ပါ။ ထုံဆေး ပျယ်ချိန်က စမယ်။ ဒါပေမဲ့ နာတာကို ခံနိုင်အောင်နည်းကို ကျကျနနလုပ်ရင် အသက်သာဆုံး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Fistula-in-Ano (FIA) ဂရင်ဂျီနာ (ဘရင်ဂျီနာ) နဲ့ တွဲဖတ်ပါ။
2. Nifedipine ဆေးသောက်နည်း၊ L-type calcium channel antagonist ဆေးမျိုးဖြစ်တယ်။ 20 mg ကို တနေ့မှာ ၂ ခါ သောက်ရတယ်။ အားနည်းချက်ကတော့ ဆေးကကြာကြာမခံလို့ တနေ့ ၂-၃ ကြိမ် သောက်ရတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုကျိုးတွေက ခေါင်းကိုက်၊ ရင်တုံ၊ ခေါင်းမူး၊ မျက်နှာနီမြန်း၊ ဗိုက်နာ၊ ခြေထောက်ရောင်၊ အစားပျက်တာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။
3. Nitric oxide ဆိုတဲ့ vasodilators သွေးကြောကျယ်ဆေးလိမ်းနည်း၊ ဒီရောဂါ နာတာရှည် ဖြစ်နေရင် သွေး ကောင်းကောင်း မလျှောက်ဘူး။ ဒါအတွက်ကောင်းတယ်။ 2%GTN ointment ကို တနေ့မှာ ၂ ခါ၊ ၆ လကြာ လိမ်းရတယ်။ ၉၈% ကောင်းတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီနည်းရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ ဝမ်းမမာအောင် အစား အသောက် အလွန်ဂရုစိုက်ဘို့လိုတယ်။ ခေါင်းကိုက်တတ်တယ်။
4. Direct current probe treatment လျှပ်စစ်နည်း၊ နာတာရှည်ဖြစ်ပြီး အတွင်း-လိပ်ခေါင်းပါ ရှိနေသူတွေကို လုပ်ပေးတယ်။ ၉ဝ% ကောင်းတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီနည်းရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ ကရိယာလိုတယ်။ လုပ်ပေးရတာ အချိန်ကြာတယ်။ လိပ်ခေါင်း တခုအတွက် ၁ဝ မိနစ်ကြာတယ်။ အဆင်မသင့်ရင် ဂရင်ဂျီနာ ဖြစ်လာတတ်တယ်။
5. Endoscopic anal dilatation ကရိယာနဲ့ ချဲ့ပေးနည်း၊ ထုံဆေးနဲ့လုပ်တယ်။ ၈၇-၈၈% ဟာ ၁-၃ လ နေရင် ကောင်းကြတယ်။ ဒီနည်းရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ သိပ်မသိရသေးဘူး။
7. Stretching of anal sphincter (Lord's anal dilatation) စအိုအထိန်းကို ချဲ့ပေးနည်း၊ ၁၈၃၈ ကတည်းက လုပ်ခဲ့တဲ့နည်း ဖြစ်တယ်။ အများဆုံးလဲသုံးတယ်။ လုပ်ရတာလဲ ရိုးလို့ လူကြိုက်များတယ်။ ဘာကရိယာမှလဲ မလိုဘူး။ ဒီနည်းရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ incontinence စအိုမလုံတာဖြစ်မှာစိုးရတယ်။ မျပာက်မှာလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
8. Excision of the anal fissure (Fissurectomy) ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်နည်း၊ အနာနဲ့အတူ anoderm နေရာကို တရိဂံပုံ လှီးဖြတ်ရတယ်။ ဒီနည်းရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ အနာကျက်တာနှေးတယ်။ အမာရွတ်ကြီးတတ်တယ်။
9. Fissurectomy and immediate skin grafting ဖြတ်တောက်ပြစ်ပြီး အရေပြား အစားထိုးနည်း၊ ခွဲစိတ်နည်း လုပ်ပြီး အနာကျက်လွယ်အောင် Split thickness graft အရေပြား အစားထိုးပေးတာပါ။ အားနည်းချက်ကတော့ လုပ်ရတာ အချိန်ကုန်တယ်။ ဆေးရုံမှာနေရမှာ ပိုကြာမယ်။
10. Combined surgical and cyrotherapeutical treatment ခွဲစိတ်နည်းနဲ့ အေးခဲစေနည်း၊ ထုံဆေးနဲ့ Lateral anal sphincterotomy လုပ်တယ်။ ပြီးတော့ N protosside cryosound အေးခဲနည်းနဲ့ Curettage ခြစ်ပြစ်တယ်။
11. Carbon dioxide laser surgery လေဆာနည်း၊
12. Lateral subcutaneous internal sphincterotomy and radio frequency surgery ခွဲစိတ်နည်းနဲ့ ရေဒီယိုလှိုင်း သုံးနည်း၊
13. Division of internal anal sphincter စအိုထိန်းကြွက်သားဝိုင်းကို ဖြတ်ပေးနည်း၊ နာတာရှည်ဖြစ်သူ၊ ခဏခဏ ပြန်ပေါ်သူတွေကို လုပ်ပေးတယ်။ sphincter spasm ဖြစ်တာကို တားဆီးပေးတယ်။ နည်း ၂ နည်းရှိတယ်။
a) Posterior internal sphincterotomy ခွဲစိတ်နည်းနဲ့
b) Lateral subcutaneous internal sphincterotomy နည်းတွေဖြစ်တယ်။
နာတာရှည်ဖြစ်နေသူတွေကို Nitroglycerine, Botulin toxin နည်းတွေနဲ့ Nifedipine နည်းတွေက ထိရောက်တယ်။ မေ့ဆေးနဲ့ ခွဲစိတ်စရာ မလိုဘူး။ ပြန်ဖြစ်တတ်သူတွေနဲ့ စောစောကနည်းတွေနဲ့ မရသူတွေကို Surgical manipulation ခွဲစိတ်နည်းလုပ်သင့်တယ်။ လူနာကို နည်းအမျိုးမျိုးတွေအကြောင်း၊ အလားအလာတွေပါ ရှင်းပြပြီး၊ လူနာကိုယ်တိုင် ကြိုက်တာကို ရွေးစေသင့်တယ်။